Thengisa ngentengo ephansi, i-electromotor esezingeni eliphakeme nge-Sogears yomhlaba wonke
intengo ephansi, i-electromotor esezingeni eliphakeme neyomhlaba wonke
Izinketho eziningi ze-electromotor
Ukuhanjiswa kwekhwalithi ephezulu kwekhwalithi yomhlaba wonke
Sinikeza ngemikhiqizo ye-electromotor. Thola ulwazi mayelana ne-Electromotor.Buy intengo ephansi, i-electromotor esezingeni eliphakeme. I-electromotor ekuqaleni yayiqhutshwa ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza. Ukusebenza kwethu kwezimoto kuzinzile, ithoshi likhulu, umsindo uncane, futhi ukushiswa kokushisa kulungile.Imoto ithengiswa ekhaya nakwamanye amazwe, ngokuchazwa ngokuphelele komkhiqizo nokuqinisekiswa kwekhwalithi.
Sithengisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme ye-Electromotor ngentengo ephakeme kusuka kuma-Chinese Electric Motors aqinisekisiwe, iStock of rotor electromotor futhi singathumela amamodeli uma edinga umdwebo wezobuchwepheshe. Inkampani eyakha ubungcweti bokuklama ugesi, isuka kumincane iye kuma-Electromotor amakhulu, futhi idonsa futhi ilawule, isixazululo esiphelele sobuchwepheshe bamaphrojekthi wezinsizakalo, Izimoto Zesitimela, Amafutha kanye negesi, Imayini, uCement, Amandla kagesi, iTurbo, Amandla weHydro, Umoya noTidal Tidal, I-Rubber and Plastics, Metallurgy, Ushukela, Marine kanye, Ukuthumela, Ukuphinda usebenzise kabusha futhi kusetshenzelwe izitshalo, amathuluzi omshini. Konke Okubalulekile Kobunjiniyela.
Sinikeza ngemikhiqizo ephezulu, yemikhiqizo ephansi
Ama-AC Electromotor,, ama-Clutch brake Electromotor, ama-Electrootor e-Clutch aguqula, Amandla aphezulu we-Electromotors, ama-Electopot proof, iziqhumane Eziyindilinga ezintathu, ukuphakama kwamamitha ama-electromotor, ukukhuphuka kwama-Marine electrodotor, ukuphakama kwama-axis ukusuka ku-112 mm kuya ku-560 Nm. Ikheji lama-squirrel wesigaba esisodwa, uhla lwezinto ezenziwa: 20 W - 000 kW, flanges okukhipha: IMB 40, IMB 500. ukusebenza kahle kakhulu.
Ama-motors ethu asetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zezicelo ezinjengezimboni, ezolimo, izindwangu, izinsimbi ezincane, i-automation, ama-daishisher, amalambu esiteji, njll.
Okuningi Kwemikhiqizo Yethu
Indlela ye-Electromotors enamagiya anamamagiya
Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizokujabulela ukukusiza!
I-NER Group iminyaka eminingi ikhethekile ekwenziweni kwama-motors wensizakalo ehlakaniphile efunwayo yamaphrojekthi amaningi. Ibhizinisi lethu eliyisisekelo lihlinzeka zonke izinhlobo zama-Electromotor ezinkampani zezimboni. Thembela kithi ukuze sibe yi-Electromotors SUPPLIER yakho. Ngokubambisana, sizokwenza okungokoqobo okubaluleke kakhulu.
Kunezinjini eziningi ezahlukahlukene lapha. Isivinini esiphansi semagnethi ehambisanayo ye-AC motor, i-AC eyenzelwe imoto, njalonjalo. Ubungako obungaphandle benziwa nge-high-amandla alloy die-casting. I-flange ne-casing yangaphandle yenziwe ngomshini wokuzenzekelayo womshini we-CNC ukwenza ngcono umthwalo wokunemba nomthelela. Ukungqubuzana kuncane, ukungqubuzana kudala ukushisa okuphansi futhi impilo yenkonzo iyathuthukiswa.
Sibuze ukuthi Yini Oyidingayo